> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka HTC dareen
Waxaan u baahan inuu ka soo kabsado xiriirada tirtiray aan dareen HTC
Waxaan leeyahay smartphone HTC la Android (HTC dareen). Waxaan tirtiray qaar ka mid ah xiriirada waxa ku saabsan saacad ka hor, kuwa muhiim ah. Sidaas doqon. Hadda waxaan u baahan tahay inuu ka soo kabsado xiriirada kuwa. Ma jiraa qalab kasta oo ka shaqeeya sidii uu bin recycle ama qashinka dib u soo ceshano xiriirrada tirtiray? Waxaan doonaa wax ku oolka ah.
Haddii aad raadineyso weeyna si ay u soo ceshano xiriirada lumay ee HTC dareen, aad tahay meesha hadda. Si loo xaqiijiyo in fursad fiican in ay dib u helaan xiriirada aad badiyay aad, aad si fiican u joojin lahaa isticmaalaya telefoonka tan aad iyaga la tirtiro. Dhab ahaantii, ma jiraan wax recycle bin ama qashinka ku saabsan telefoonka, si fudud kuma aad soo celin kartaa xiriirada aad la tirtiro ka bin recycle ah sida on your computer. Waxaad u baahan tahay si aad u hesho HTC dareen qalab kabashada xiriir si toos ah baarista telefoonka iyo dib u soo ceshano liiska xiriir lumay.
Next, aynu hubi sida ay u soo ceshano HTC dareen xiriirada lumiyay Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) in tallaabooyinka. Barnaamijka Tani waxay kaa caawin kartaa in aad baarista phone ceshan xiriir la tirtiro, isagoo hab fudud oo wax ku ool.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone for Android
Marka hore, soo bixi version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah. Sidaa daraadeed, iskaan kartaa telefoonka iyo ku eegaan wixii aad soo kaban karto, waxay ka.
Tallaabada 2. Deji telefoonka ee hab-kabashada iyo xerto
Markaasay aad u baahan tahay si aad u HTC dareen in hab-kabashada. Haddii aad ka hor inta uusan u sameynay, waxaad tagi kartaa tallaabada xigta. Haddii aan, waxaad u baahan tahay inaad hadda samayso:
Riix Settings telefoonka aad si aad u furto.
Raadi fursado Developer oo guji si ay u galaan.
Hubi si aad u awood debugging USB .
Markaasay aad arki doonaa barnaamijka aad muujinaysaa sida soo socota.
Tallaabada 3. Hadda baarista dareen HTC
Waxaad bilaabi kartaa in hadda baarista telefoonka. Guji Start in aynu barnaamijka falanqeeyaan xogta ku saabsan telefoonka ugu horeysay. Dhaqaaq si waafaqsan hanuunka, ka dibna Wondershare Dr.Fone for Android iskaan doonaa taleefanka si aad u hesho dhammaan macluumaadka recoverable ku yaal.
Tallaabada 4. ceshano xiriirada lumay ee aad dareen HTC
Waqtiga iskaanka ku xiran yahay qadarka xogta ku kaydsan aad dareen HTC, xogta la tirtiray iyo waxyaabaha jira. Marka scan dhamaado, dhammaan xogta recoverable lagu soo bandhigi doonaa qaybaha sida xiriirada, fariimaha, gallery, videos, iwm Dooro Xiriirada, oo aad ku eegaan kara waxa ku qoran buuxa mid mid. Iyaga hubi sida ay baahidaada iyo iyaga badbaadiya, si aad u computer adigoo gujinaya bogsadaan.
Fiiro gaar ah: The file xiriir kabsaday badbaadi kara si gaar ah CSV, VCF iyo HTML qaabab. Waxaad dooran kartaa qaabka aad rabto in aad akhrido, far ama iyaga dib ugu telefoonka dhigay, ilaa iyo inta aad leedahay shuruud noocan oo kale ah.